သင်က 7Z ARCHIVE ကိုဖွင့်လှစ် - ဖိုင် FORMAT - 2019
အဆိုပါ archive ကို 7z ကိုဖွင့်
ဒက်စ်တော့ Operating System ကိုအသုံးပြုသူများကို Windows, MacOS သို့မဟုတ် Linux ရှိမရှိ, သင်ကားတိုင်ပေါ်တွင်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ပရိုဂရမ်ကိုမှာသူတို့ကိုပိတ်ဖို့ရန်လေ့ရှိပါသည်။ အဆိုပါမိုဘိုင်း operating system ကို Android မှာအကြောင်းပြချက်တစ်ခုအရေအတွက်ထိုကဲ့သို့သောအခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါသည်, အဘယ်သူမျှမရှိ - လျှောက်လွှာကိုပိတ်ပါ, နှင့်ခြွင်းချက်လွှတ်ပေးရန်ပြီးနောက်ကအားလုံးကိုနေဆဲနောက်ခံအလုပ်လုပ်ဆက်လက်စာသားမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ထိုအသေး, ဒီပြဿနာဖြေရှင်းနည်းတွေကို, သူတို့အဘို့ကျနော်တို့ဆက်လုပ်ပါမယ်နေကြသည်။
Android ပေါ်မှာ app ကိုပိတ်ပြီး
အဘယ်သူမျှမကိစ္စတခုကိုသင်က Android စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ် tablet ကိုအသုံးပြုပြီးဖွင့်အဘယျသို့ကိရိယာမိုဘိုင်းအစီအစဉ်ကိုပိတ်များအတွက်အများအပြားရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုလေ့လာရမှီ, ထွက်ပေါက်မှအစဉ်အလာလမ်းကိုကြည့်။
အန်းဒရွိုက်နှင့်အတူကိရိယာများပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်အများဆုံး application များအတွက်, တဦးတည်းကလစ်နှိပ်မှထွက်ရန် "နောက်သို့"သငျသညျဒါခေါ်ကြိုဆို screen ပေါ်မှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်, ဒါမှမဟုတ် "အိမ်" ကိုမဆိုလုပ်ပါ။
ပထမဦးဆုံးအရေးယူ, သင် program ကိုကို start up ဘယ်မှာမှပြန်ဒုတိယသင်ပို့ပါလိမ့်မယ် - Desktop ပေါ်မှာ။
ထိုအခါခလုတ်ကိုလျှင် "အိမ်" ဒါဟာမဆိုလျှောက်လွှာလှည့်, အပြစ်ကင်းစင်စွာအလုပ်ဖြစ်တယ်, "နောက်သို့" ဒါဟာအမြဲအဖြစ်ထိရောက်သောမဟုတ်ပါဘူး။ အဆိုပါအရာအချို့ကိစ္စများတွင်က output ကို double-click နှိပ်ခြင်းဖြင့်များသောအားဖြင့်ပေါ့ပ်အပ်အကြောင်းကြားစာအစီရင်ခံသောဤခလုတ်ကိုပြုကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဤအစဉ်အလာကို Android OS ကိုဖြန့်ချိဗားရှင်းအလွယ်ကူဆုံးဖြစ်ပါသည်, သို့သော်ပြည့်စုံ application ကိုပိတ်ထားသည်မဟုတ်။ တကယ်တော့က CPU နဲ့ RAM ကိုပေါ်သေးငယ်တဲ့ဝန်ဖန်တီးအဖြစ်အနည်းငယ်သာဘက်ထရီပါဝါကိုစားသုံး, နောက်ခံကို run ဖို့ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်သင်မည်သို့လုံးဝပိတ်သလဲ?
Method ကို 1: Menu ကို
တချို့က developer များအသုံးဝင်သော option ကိုသူတို့ရဲ့မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များကို - သင်ကပုံမှန်အတိုင်းလမ်း (ကိုနှိပ်ပြုပါရန်ကြိုးစားသောအခါမီနူးပြီးအတည်ပြုချက်ကိုမှထွက်ရန်နိုင်စွမ်း "နောက်သို့" ) ကိုပင်မမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ။ အများဆုံး applications များ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ဒီ version ကိုမိတ်ဆက်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုအားဖြင့်ညွှန်ပြရိုးရာလွှတ်ပေးရန်ခလုတ်ကနေအဘယ်သူမျှမကွဲပြားသော်လည်းတချို့အကြောင်းပြချက်အများအပြားအသုံးပြုသူများကိုပိုမိုထိရောက်သောဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ action ကိုသူ့ဟာသူစွပ်စွဲမှန်မှန်ကန်ကန်ထွက်ယူသွားတတ်၏ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်လို့ပဲ။
ပြီးတာနဲ့လျှောက်လွှာများကြိုဆို screen ပေါ်မှာပဲ click နှိပ် "နောက်သို့"ပြီးတော့ဆုတ်ခွာရန်သင့်ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းတစ်ခုနှင့်အတူ window ကိုတုံ့ပြန်၌ဤ action ကိုအတည်ပြုရွေးချယ်ပါ။
အချို့ applications များ၏ Menu ထဲမှာကပကတိသဘောအရ output ကိုမှဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်မကြာခဏကြောင့်လာမယ့်အသုံးပြုမှုကိုသင့်ရဲ့အသုံးပြုသူအမည်နှင့်စကားဝှက် (သို့မဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်) နဲ့ re-login ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်များအတွက်အရေးယူလျှောက်လွှာပိတ်, ဒါပေမယ့်လည်းအကောင့်ထဲကတစ်လမ်းကိုထောက်ပံ့ပေးမသာ, အကြောင်း, ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခဏလက်ငင်းတမန်တို့ကိုနှင့်လူမှုရေးကွန်ရက် clients များအတွက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ထိုသို့သော option ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အနည်းဆုံးကအရာ၏အသုံးပြုမှုကိုအကောင့်လိုအပ်တယ်, များစွာသောအခြား application များအတွက်ပုံမှန်ပါပဲ။
ပိတ်ဖို့ရန်, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘဲ, ဤ application များမှထွက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းအားလုံးက Menu ထဲမှာသင့်တော်တဲ့ item ကိုရှာဖွေ (တစ်ခါတစ်ရံက setting တွင်ဝှက်ထားခြင်းသို့မဟုတ် user ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုတွေ့မြင်သည်) နှင့်၎င်းတို့၏ရည်ရွယ်ချက်များကိုအတည်ပြုပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: Android မှာကြေးနန်းအပေါ်ထွက်ရဖို့ကိုဘယ်လို
ထိုအသေးကမျှော်မှန်းထားသည်မဟုတ်သောစနစ်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအပေါ်ကျေးဇူးတင်လေးမြတ်အကျိုးသက်ရောက်မှုသော်လည်း, တောင် app ကိုအကောင့်မထွက်ပြီးနောက်နေဆဲတက်ကြွနေဖို့လိမ့်မည်ဟုနားလည်သဘောပေါက်သင့်ပါတယ်။
Method ကို 2: မှတ်ဉာဏ်၏ချ
လျှောက်လွှာကိုပိတ်လိုက်ပါနှင့်ရိုးရှင်းစွာမှတ်ဉာဏ်ကနေချရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေနိုင်ပါတယ်။ မှန်ပါသည်, သူတို့သည်သင့် re-စတင်ရန်ကြိုးစားသောအခါဆိုတဲ့အချက်ကိုပုံမှန်အတိုင်းထက်ပိုပြီးစနစ်ကအရင်းအမြစ်များကိုသုံးစွဲလိမ့်မည်အကောင့်သို့ယူသင့်ပါတယ်။ သင်တန်း၏ဤ, တစ်ခညျြးနှီးဆှေးနှေး, သင်မူကားအစဉ်အဆက်ဒီတော့ program တစ်ခုကိုပိတ်လိုက်လျှင်, သင်သည်သူတို့၏နှေးကွေးက start နှင့်အလုပ်၏အစအဦးသာရင်ဆိုင်ရပေမယ့်လည်းပါဝါစားသုံးမှုတိုးပွားလာနိုင်ပါတယ်။
ဒီတော့ထို့နောက်ခေါ်ဆိုမှု၏ပြီးပြည့်စုံသောပိတ်သိမ်း, ပထမဦးဆုံးသတင်းစာမကြာသေးမီ apps များ menu ကို (multitasking ကို menu က) နှင့်အဘို့ပုံပေါ်သောစာရင်းထဲတွင်လက်ျာရှာဖွေပါ။ ကွာသူ့ကို Whisk, (ထို Xiaomi ကအပေါ်ထိပ်ဆုံးဖို့ဒါမှမဟုတ်အောက်ခြေ) မျက်နှာပြင်အနှံ့ left ကနေညာဘက်ကိုပွတ်ဆွဲ, ဒါမှမဟုတ်အထက်ညာဘက်ထောင့်ရှိ X ပေါ်မှာနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သူကပိတ်ပါ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုရှိပါတယ် "အားလုံးကိုရှင်းလင်းတဲ့", ဒါကအားလုံး applications များပိတ်ဖို့ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေနေသည်။
မှတ်ချက်: တစ်စက်မှုသော့ချက်ရှိပါတယ်ထားတဲ့အဟောင်းစမတ်ဖုန်းတွင် "အိမ်" (ဥပမာ, ကို Samsung ၏အစောပိုင်းမော်ဒယ်များ), Multitask ကို menu ကိုခေါ်ခြင်းကြောင့်အခြား button ကိုရွေးချယ်စရာပုံမှန်အတိုင်း menu ကိုတောင်းဆိုဘို့တာဝန်အဖြစ်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်ပေသည်။
Method ကို 3: အတင်းအဓမ္မမှတ်တိုင်
multitasking ၏ menu ကိုပိတ်ပြီး၏နည်းလမ်းသငျသညျကိုက်ညီခြင်းမရှိပါတချို့အကြောင်းပြချက်လျှင်သင်တစ်ဦးထက်ပိုသောအစွန်းရောက်လမ်းလုပျနိုငျ - လုံးဝ application ကိုရပ်တန့်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းဤအမှုကိုပြုသောသည်:
မဆိုအဆင်ပြေလမ်းပွင့်လင်း "Settings" ကို ယင်း၏ကို Android-device ကိုမှသွားပါ "Applications ကိုနှင့်ဆိုင်ရာအသိပေးချက်များ" (ဒါမှမဟုတ်ရုံ "Applications ကို").
ယင်းနောက် tapnuv သင့်လျော်သောကျောက်စာပေါ်တွင်သို့မဟုတ်အမည်တူ (အန်းဒရွိုက်ဗားရှင်းပေါ် မူတည်. ) ၏ tab ကိုသွားနေဖြင့်အားလုံး installed applications များစာရင်းဖွင့်လှစ်။
အလုပ်ဖြည့်စွက်ရန်လိုအပ်သည့်လျှောက်လွှာ, ရှာဖွေပါ။ ၎င်း၏အမည်ကိုပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ, အဲဒီနောက်, တစ်ချိန်ကစာမျက်နှာပေါ်တွင်ဖော်ပြချက်နှင့်အတူ button ကို "Stop"။ သငျသညျကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင့်ရည်ရွယ်ချက်ကိုအတည်ပြုဖို့လိုအပ်ခဲ့လျှင် "အိုကေ" pop-up window ကိုနှင့်အောင်မြင်သောပိတ်ပွဲအာမခံပါသည်။
အဆိုပါ application ကိုမှတ်ဉာဏ်ထဲကနေပိတ်မြေပေါ်သို့ချသည်။ သင်ရုံဆော့ဖ်ဝဲထုတ်ကုန်ကွာတိုက်နိုင်ဘူးတဲ့အကြောင်းကြားစာ၏ဖယ်ရှားပစ်ရနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပမာထဲမှာပြသခဲ့ပါသည်လိုတဲ့အခါစကားမစပ်ဒီနည်းလမ်းကိုထိရောက်မှုအရှိဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
ယခုတွင်သင်သည်အန်းဒရွိုက် applications များအပေါ်ပိတ်အပေါငျးတို့သဖြစ်နိုင်သောနည်းလမ်းများကိုအကြောင်းကိုသိသော။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ရပ်များ၏ထိရောက်မှုအနည်းငယ်မျှသာဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလည်သဘောပေါက်ရပါမည် - စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်တိုးကအနည်းဆုံးအချို့ (သို့သော်နေဆဲယာယီ) ကိုပေးနိုင်ပါသည်အားနည်းခြင်းနှင့်အဟောင်းစမတ်ဖုန်းနှင့် tablet လျှင်, အတော်လေးခေတ်မီပင်ပျမ်းမျှလူတစ်ဦးမဆိုသတိထားမိဖို့မဖြစ်နိုင် devaysakh -or အပြုသဘောအပြောင်းအလဲများကို။ သို့သော်ကျနော်တို့ကဒီပစ္စည်းကိုသင်တို့အဘို့အအသုံးဝင်သောဖြစ်ခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောလိမ်းပြဿနာတစ်ခုပြည့်စုံအဖြေကိုရဖို့ကကူညီသည်ဟုမျှော်လင့်ပါတယ်။